၆၁နှစ်အရွယ်ရှိသက်ကြားအိုအဖေအရင်းက ၁၃နှစ်သာရှိသေးတဲ့သမီးအရင်းကို အပြာကားတွေပြပြီအကြိမ်အကြိမ်အဓမ္မကျင့်ပြီး ကျင့်နေပုံကိုVDOတောင်ရိုက်ထားသေးသတဲ့ဗျာ- အဖေဖြစ်သူမှ(၁၃)နှစ်အရွယ်သမီးလေးအား ညစ်ညမ်းကားများပြပြီး သားမယားအဖြစ်အကြိမ်ကြိမ် ပြုကျင့်ပုံအား video ရိုက်ကူးထားမူ့ဖြစ်ပွား အမှုဖြစ်စဉ်မှာ….
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အနောက် ပန်းတောင်းမြို့နယ် ဥသျစ်ပင်စခန်း အနောက်ဘက်၂၆ မိုင်ခန့်အကွာ ညောင်ကျိုးအုပ်စု ကျွဲလေးကျေးရွာနေ ဒေါ်သန်းသန်းရီ တိုင်တန်းသည်မှာ ၃ . ၄.၂၀၂၀ (၁၆းဝ၅)အချိန် တောင်ကုတ်မြို့နယ် သပြေကျေးရွာ အုပ်စုနေ အဒေါ်ဖြစ်သူ ဒေါ်သောင်းရီထံသို့ ပို့ထား သောသမီးငယ် မအေးသက်ကျော်( ၄) နှစ်မှာနေမ ကောင်းဖြစ်၍ သွားနေစဉ် ကျွဲလေးကျေးရွာနေအိမ် တွင် သမီးဖြစ်သူ မဝင်းဝင်းမော်နှင့် ဖခင်ဖြစ်သူ ဦး ထွန်းသိန်း(၆၁) နှစ် အတူရှီပြီး အိပ်နေစဉ်
ထိုနေ့ည ၁၁းဝဝနာရီအချိန်ခန့်သမီးဖြစ်သူ မဝင်းဝင်းမော်အိပ် နေသည့်ချေရင်းခန်းထဲသို့ ခေါင်းရင်းအခန်းတွင်အိပ် နေသော ဖခင်ဖြစ်သူဦးထွန်းသိန်းမှ အခန်းထဲဝင်၍ သမီးဖြစ်သူအား လုပ်နိုးကာလက်ကိုင်ဖုန်းထဲရှိ ဗီဒီယို ညစ်ညမ်းအပြာကားများအားကြည့်ခိုင်းပြီး သမီး ထမီအား အတင်းဆွဲချွတ်ကာ အပေါ်မှတက်ခွစေ၍ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်စေခိုင်းခဲ့သည်ဟုဘေးအိမ် မှ ကြားသိရသဖြင့်မသန်းသန်းရီမှာသပြေမှကျွဲလေး ရွာသို့ပြန်လာပြီးသမီးဖြစ်သူအားမေးမြန်းရာဖခင်ဖြစ် သူဦးထွန်းသိန်း၆၁နှစ်မှသမီးဖြစ်သူအားသားမယား အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်သည့်အပြင်သားမယားပြုကျင့်နေစဉ်အတွင်း လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် video ရိုက်ရိုက်ယူထားပြီး သမီးဖြစ်သူအား၎င်းvideoများကိုပြကာသားမယားအကြိမ်ကြိမ် ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း
အထက်ပါ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပါတ်သက်ပြီး အမေဖြစ်သူ မ သန်းသန်းရီမှ သမီးဖြစ်သူ မဝင်းဝင်းမော် ၁၃ နှစ်အား သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့် သူ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးထွန်းသိန်း ၆၁နှစ်အား တရားဥပ ဒေအရအရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တိုင်တန်းသဖြင့် ဦးထွန်းသိန်းအားဖမ်းဆီးက လက်ကိုင်ဖုန်းအား စစ်ဆေးစဉ် မြေးဖြစ်သူနှင့် သားမယားဆက်ဆံထား ကြသော videဝ ဖိုင်များ တွေ့ရှိ၍ သက်သေအဖြစ် သိမ်းဆည်းခါ ဥသျှစ်ပင်ရဲစခန်းမှ(ပ)၆၆/၂၀၁၉ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆/၅၁၁ ဖြင့့် .၄.၂၀၂၀ (၁၈၀၅) အချိန်အမှုအား လက်ခံဖွင့်လှစ်ပြီး ဒုရဲအုပ် သိန်းကျော် မှ အမူ့စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိ ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
အဖေနှင့်သမီးတို့၏သက်သေ video ဖိုင်အားပိုစ့် တင်ရန် မသင့်တော်သဖြင့် မတင်တော့ပါကြောင်း ။
Crd-ရဲမူ့ခင်း သတင်း(Aye Thiri Kyaw)